ट्रम्पको प्रतिक्रियालाई कसले भने ‘पागलपनको उपज’ ?
HOME » ट्रम्पको प्रतिक्रियालाई कसले भने ‘पागलपनको उपज’ ?
अमेरिका। भेनेजुएलामा हाल जारी संकट समाधान सैन्यबलबाट हुन सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार बताएका छन् ।
अमेरिकासँग भेनेजुएलाको समस्या समाधान गर्ने धेरै उपाय भएको तर त्यस मध्य सैन्यबलबाट गरिने उपाय पनि एउटा भएको उनले बताएका छन् ।
भनेजुएलाको विषयमा भएको छलफलको क्रममा एक सम्बाददाताले गरेको प्रश्नको जवाफ दिदै अमेरिकी सेना संसारभरी रहेका र भेनेजुएला अमेरिकाबाट खासै टाढा नरहेको बताएका छन् ।
भेनेजुएलाका रक्षा मन्त्री भ्लादिमिर प्याड्रिनोले ट्रम्पको यस भनाईलाई ‘पागलपनको उपज’ भन्ने संज्ञा दिर्एका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यसलाई राष्ट्रपति मादुरोको शक्ति बढाउने काम मात्र भएको टिप्पणी गरेका थिए । कैयौँ देशले यो निर्वाचन अनावश्यक भएको समेत टिप्पणी गरेका छन ।
विपक्षीले यस निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए । भेनेजुएलाको प्रतिपक्षी गठबन्धन समूह डेमोक्रेटिक युनिटी राउन्ड टेबल ९एमयूडी० ले वर्तमान राष्ट्रपति मादुरोले भेनेजुएलामा राजनीतिक सङ्कट चरम सीमामा पुग्दासमेत समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएको थियो ।